Raggaani waxay la tacaalayaan xashiishka Singapore - mana dareemayaan cabsi. • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Raggaani waxay la tacaalayaan xashiishadda Singapore - mana dareemayaan cabsi.
Raggaani waxay la tacaalayaan xashiishadda Singapore - mana dareemayaan cabsi.
albaabka daroogada July 12 2019
maqaal by daroogada July 12 2019
Ka ganacsiga daroogada ee Singapore macnaheedu waa ciqaabta dilka, laakiin taasi kama hor istaagin soosaarayaasha warshadaha iyo shirkadda tiknoolajiyadda ee CannAcubed inay halkaas degto.
Waxay rajeyneysaa inay soo gasho qiimaha hemp sida badeecad beero, iyada oo suuqa warshadaha adduunka lagu qiyaaso inuu qiimihiisu yahay $ 2025 bilyan sanadka 10,6.
Cannabis waa dhibaato halis ah oo ka jirta Singapore, halkaas oo ka ganacsiga maandooriyaha waa xukun xukun ah oo xitaa haysashada waa ciqaab ilaa 10 sano oo xabsi ah. Hase yeeshee, suuqyada loo yaqaan cannabis sharciga ah ayaa noqonaya mid faa'iido badan oo adduunka ah, xitaa ganacsatada dawladaha deriska ah ee daawada caanka ah waxay raadinayaan siyaabo lagu iibsado ganacsiga.
Tan iyo bishii Maajo, Singapore waxay noqotay xarunta caalamiga ah ee CannAcubed, oo ah beeralayda xashiishadda cannabis ee ka hawlgasha Yunnan, Shiinaha. CannAcubed waxay ku takhasustay beerista xashiishadda xashiishadda ama noocyada hemp ee xashiishadda oo ka kooban wax ka yar 0,3 boqolkiiba xarunta nafsiga ah ee tetrahydrocannabinol (THC). Cannabis waa sharci darro Shiinaha, laakiin beeralayda xashiishadda waxay ka shaqayn karaan Yunnan iyagoo wata ogolaansho dawladeed.
"Waxaan u dhoofinay CBD Yurub iyo suuqyada kale ee waqooyiga," ayuu yiri maamulaha CannAcubed Glenn Davies, isaga oo tixraacaya cannabidiol, nasasho aan nafsiyan ahayn. "Markaa waxaa sidoo kale jira diiradda gudaha ee Shiinaha, oo leh dunta hemp iyo dharka. Saddex, waxa aanu horumarinayna bangi abuur xashiishad noo gaar ah.
Ugu dambeyntii, rajada CannAcubed rajeyneyso in ay sameyso nooca cannabis ee aan ku jirin THC.
Hemp, oo bixiya fiilooyin la mid ah geedaha laakiin si dhakhso leh u kora, ayaa si isa soo taraysa loogu arkaa inay tahay wax soo saarka beeraha ee soo baxaya. Suuqa hemp warshadaha adduunka ayaa la filayaa inuu ku kaco US $ 2025 bilyan 10,6, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Grand View Research. Warshaddu waxay soo jiidanaysaa dhaqan hodan ku ah Bariga Aasiya. Shiinaha, Kuuriya iyo Jabbaan, fiilooyinka hemp ayaa loo isticmaali jiray in lagu sameeyo dhar, xarig iyo warqad.
CannAcubed waxay ka diiwaan gashan tahay Singapore shirkad bayoolaji ah waxaana loo aasaasay "shirkad xashiishad kala duwan leh". Hawlgallada waa sharci, haddii lagu fuliyo meel ka baxsan magaalada-gobolka. “Saldhigga Singapore waxaa si fudud loogu aasaasay hay'ad heysata, marka haddii aan howgallo ku leenahay Shiinaha ama weligood Thailand ama Laos - taasi nama saameyn doonto Singapore,” ayuu yiri Davies.
Davies wuxuu ganacsade u ahaa 15 sanado badan waxaana loo isticmaalaa jaangooyooyinka suuqyada soo baxaya. Shirkadda wax soo saarka cannabis oo ka socota Singapore, halkaas oo uu deggan yahay rasmi ah, ayaa laga yaabaa inay tahay tii ugu adkayd ee taariikhdeeda.
Dadka reer Singapore aad ayey u xiiseynayaan, aad ayeyna u xiiseynayaan, ayuu yiri Davies. Way faraxsan yihiin waxayna rabaan inay wax badan ka ogaadaan oo ay fahmaan warshadaha. Aragtidayada had iyo jeer waa nidaam waxbarasho oo joogto ah… dadku waxay rabaan inay bartaan waxa aan qabanno, sida ay u shaqeyso, meesha aan wax ka iibsanno, sida loo soo saaro CBD. “
Dalagyadii ugu horreeyay ee shirkadda ayaa la beeray bishii Luulyo, dalaggii ugu horreeyayna wuxuu dhacay bishii Nofembar - waxsoosaarka afar bilood oo keliya.
"Waxaan eegeynaa diiradda meelaha yar ee suurtagalka u ah xashiishadda," ayuu yiri Davies ka hor inta uusan ogaan ujeedooyinka shirkadda. Iska yaree qashinka adoo soo bandhigaya balaastigga ugu horreeya adduunka ee run ahaantii baaba'aya; xalinta qaar ka mid ah dhibaatooyinka tamarta adduunka iyadoo loo tixgelinayo hemp inay tahay bedelka biofuel; wax ka qabashada xaalufinta dhirta iyadoo loo soo bandhigayo xashiishka beddelka warqadda iyo walxaha laga sameeyo geedaha. “
Horraantii sanadkan, Hay'adda Cilmi-baarista Qaranka ee Singapore waxay ku dhawaaqday daraasado ku saabsan cannabinoids synthetic, iyo CannAcubed ayaa mar hore ka hadlay doorka cilmi-baarista. Davies wuxuu u arkaa inay calaamad u tahay in magaalada-gobolka ay ugu dambeyntii la tacaali doonto awoodda dhaqaale ee xashiishadda.
Aniga oo og in Singapore ay durbaba xiiseyneyso waxtarka daaweynta ee CBD, waxaan u maleynayaa inay tahay waqti uun.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso SCMP (EN, ilaha)
Canna-TechcannabisCBDsaliid cbddembidaroogadaxagashasharci ahaansharci-dejintaSingaporeTHCAdduunka oo dhanbeerista cannabis
Sababta loo isticmaalo uumiga qoyan waa mustaqbalka isticmaalka cannabis
Jaamacadda Wageningen iyo Signify waa baarista saameynta nalalka LED-ka ee Dhexdhexaadinta
Farmashiyayaashu waxay bixiyaan 7 boqolkiiba xashiishada cannabis
5 dareemo wanaagsan oo aad la kulmi karto...
Laga soo bilaabo baar ilaa beero xashiishad sharci darro ah: dabku wuxuu horseedaa…